Vitamin Natural E Dry Powder
NATURAL USEBENZE MFUNDO
Ningbo Dahongying Bioengineering Co., Ltd. (Est.1998) ifumaneka kwi Ningbo - iziko koqoqosho kumazantsi iteksti River Delta. Ekubeni uvaliwe Ningbo Port empumalanga, kwaye inzuzo enkulu geographical njengoko ejongene Shanghai emntla. Inkampani ishishini eluhlaza kunye nokusingqongileyo-friendly kushishino biotech, yaye yanikwa nezihloko ezininzi kwiminyaka yakutshanje, oko ingumnini iimbasa ezininzi emakriweni self-ezintsha, okonga umbane, ukhuselo lokusingqongileyo kunye nothando yoluntu.
Inkampani umenzi yokuqala Natural USEBENZE eTshayina, yaye ngokukodwa xa kusenziwa Natural USEBENZE kangangamashumi eminyaka. Ijolise ingqalelo yayo ekuboneleleni ukutya okunempilo kunye ephambili ubuchule kunye nomgangatho obalaseleyo kubaxhasi ehlabathini jikelele. Ukususela mhla yasekwa, iNkampani isihange ekomelezeni solawulo kunye nendlela ezintsha. Ngokusekelwe ingqiqo kulawulo Human Based, iNkampani iseke inkqubo esemgangathweni isiqinisekiso sound ukuze kuqinisekwe iimveliso ezikumgangatho ophezulu.
Nangona inkampani waqonda imbali ezukileyo, kusekho indlela ende ukuya kwixesha elizayo. Kuphela yi ubuchwepheshe phambili kunye namava nolawulo osisityebi, kunye inkalo yokomoya "Green, Healthy and Happy", njani ukuphumeza injongo lweshishini kwekhulu ubudala kunye nehlabathi edumileyo brand. Siyakholwa ukuba, ngenxa nzima yethu, Dahongying uya kuba inkwenkwezi ekuphumeni Natural USEBENZE.
Ukuba unomdla iimveliso zethu okanye unayo nayiphi na imibuzo, nceda uzive ukhululekile ukuqhagamshelana nathi. Siyathemba ukuba ukuseka ubudlelwane zentsebenziswano kwixa elizayo.
NO.166 Beihai ROAD XIEPU ZHENHAI INDAWO-315204, Ningbo CITY, Zhejiang KWIPHONDO, CHINA